शर्मामा कति कैलोरीहरू छन्?
शर्मा एक सामान्य सामान्य फास्ट फूड डिश भएको छ, जुन हामीलाई पूर्वी व्यञ्जनबाट आएको थियो। शर्मामा श्लोमाको क्यालोरीको सामग्रीले यसलाई प्रयोगमा अवस्थित सामग्रीमा निर्भर गर्दछ र मुख्यतः यसको मुख्य भागको प्रकार र गुणस्तर मा मासु मा आधारित हुन्छ।
शर्मा भनेको के हो?
शास्त्रीय शर्मा एक पतली फ्लैट केक वा पेटा, फ्राइड कटा मासु, लसुन खट्टा क्रीम चटनी, ताजा गोभी, गाजर, प्याज, लसुन, अजवा र मसाले जस्तै तयार छ: जिरो, हल्दी, काली र कालो मिर्च।
यो डिश तयार गर्न, विभिन्न प्रकारका मासु प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, अरब देशहरूमा शर्ममा एक माछा वा एक रामको मासुबाट तयार छ, इजरायल मा एक टर्की वा चिकन मा। धेरै अन्य देशहरूमा, शाम्मा गोमा, सुँगुर र चिकनको मासु संग भेटिन्छ। सेतो चिकन मासुको सबैभन्दा कम-क्यालोरी शर्मा हो। शर्मामा कति कार्बोहाइड्रेट पनि यसको सबै सामग्रीमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं आधारमा चिकन मासुको डिश लिनुभयो भने कार्बोहाइड्रेटको मात्रा औसतमा 22 ग्राम हुनेछ।
चिकन शर्मामा कति कैलोरीहरू छन्?
यदि चिकन मासु संग शरामा सख्ती को अनुच्छेद अनुसार पकाएको छ, तब यस डिश को 100 ग्राम मा 260 केकेल हुन्छ। तर यो क्यालोरी सामग्री केवल एक आदर्श भागमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। शर्मा को प्रशंसक सजिलै संग घर मा पका सकते हो।
यो डिशको तयारीले उच्च पाक कलाको आवश्यकता पर्दैन। शर्मा आफैलाई गरिरहनु भएको छ, तपाईं अधिक सटीक क्यालोरी सामाग्रीको गणना गर्न सक्नुहुनेछ, कुन थप सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर जान्नुहोस्। यो व्यंजन मासु थप्न शाकाहारीहरूको लागि तैयार हुन सक्छ।
यो सडक खट्टेमा शर्मा को खरीद गर्दा विशेष गरी सावधान रहन लायक छ। चटनीको सट्टामा फैटी मासु, केचअप र मेयोनेज प्रयोग गरेर धेरै पटकले क्यालोरीको संख्या बढाउन सक्छ।
हक - क्यालोरी सामाग्री
कस्ता खानाहरूमा भिटामिन बी3हुन्छ?
कच्चा मासु मेनु
Jujube को लागि उपयोगी छ?
प्रभावकारी वजन घटाने
अरुकुला के लागि उपयोगी छ?
गाईको आलो - राम्रो र खराब
वजन घटानेको लागि
कसरी वजन कम गर्न को लागी दलिया बेंच गर्ने?
सिमुलेटरमा खुट्टा फ्याँक्ने - प्रदर्शन गर्ने प्रविधि
गेहूं फ्लेक्स राम्रो र खराब छन्
वजन खोने को सलाद "व्हिस्क"
सूरजमुखी बिरुवाहरू - क्यालोरी सामग्री
बच्चाको मूत्रमा रक्त
घरमा फोटो कत्ति सुन्दर छ?
निलम्बित लथ छत
छोरालाई कसरी सजाय दिनुहुन्छ?
टेबल लैंपका लागि लैंपशेड आफ्नै हातले
एक्वैरियममा ब्राउन पट्टिका
के मैले6बजे पछि खाना खाएन भने म वजन कम गर्न सक्छु?
पिप्पा मिडलेटन र जेम्स म्याथ्सले विवाहको यात्रामा सिडनीलाई फायर गरे
पूल को लागि चश्मा
सौर प्यानलहरूमा बागवानी रोशनी - कसरी रोचक छ साइटलाई सजाय?
Karsil या Essentiale?
Eggshell - लाभ
साइप्रसमा कति पैसा लिने?
लेजर द्वारा एथरो मेटिने
गर्भावस्थाको समयमा पोषण - 20 हप्ता
एलिजाबेथ II बाट स्पार्कलिङ शराबको पहिलो ब्याच केही मिनेटमा खरीद गरिएको थियो
"ज्वारोर अल्ट्रा" मातम जनावरहरू
फिनल्याण्डमा भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
स्थायी बाल सीधा - एक आधुनिक प्रक्रिया को पेशेवर र विपक्ष
ओमान को धड्कन
केट मिडलेसन, राजकुमार विलियम र हैरीले ओलम्पिक पार्क भ्रमण गरे